လယ်ယာဥပဒေကြမ်းပြီးနောက် - အဘယ်ကြောင့် CBD ရေနံပြည်နယ်အားလုံး 50 အတွက် "တရားဝင်" ပါသလဲ
ပြည်နယ် ၅၀ တွင် CBD ဆီတရားဝင်ရှိသလား။
CBD ရေနံသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်လယ်ယာဥပဒေကြမ်းမှတရားဝင်သည်
CBD Oil သည်ပျံ့နှံ့လာပြီးပြည်နယ် ၅၀ လုံးတွင်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်ဟုလူအများကပြောကြသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးခြောက်စက်ရုံရှေ့နေပါ ဆေးခြောက်ဥပဒေရေးရာမေးခွန်းများကို သငျသညျဆေးခြောက်ဥပဒေများပုံမှန်နိုင်အောင်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာသက်တမ်းကြာရှည်ကြည့်ရှုသူနဲ့ပတ်သတ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီကမေးခွန်းတစ်ခုအများကြီးရပါတယ်။ ငါတို့မကြာခင်အဲ့တာကိုရတော့မယ်။
ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးတော့မင်းဟာအဆုံးအထိဆက်ရှိနေ ဦး မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကရစ်ချတ်နစ်ဆင်ရဲ့ပုံကိုရွံရှာပြီးကျွန်တော့်ကိုပြုတ်ကျသွားစေတာမြင်တဲ့အချိန်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်ဒီနေ့မေးခွန်းကိုမမေးခင်ရှေ့ကိုသွားပြီးအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များထဲမှာမင်းကိုထားခဲ့ပါ။ သင်မမေးမချင်းသင့်မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်မဖြေနိုင်ပါ။ ပြီးတော့သင်ဒီမှာရှိနေတုန်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာနဲ့လက်မထောင်ပါစေ။
ယနေ့ခေတ်မေးခွန်းမှာ JX Fit မှဖြစ်သည်။ သူက“ ကုမ္ပဏီ ၅၀ လုံးကို CBD လျှော်ပန်းပွင့်ကိုပြည်နယ် ၅၀ လုံးကိုပို့ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါကလုံးဝတရားဝင်တယ်။ တစ် ဦး ဆေးခြောက်စက်ရုံ။ ဒါဟာလျှော်စက်ရုံကနေလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဥပဒေရေးရာလား?"
မေးခွန်းကြီး ပြီးတော့စဖို့, ငါတို့ဖက်ဒရယ်နဲ့ပြည်နယ်ဥပဒေနှစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားအောင်သေချာအောင်လုပ်ကြပါစို့၊ ပြီးတော့ငါတို့ကစီးပွားရေးနည်းနည်း၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စီးပွားရေးနည်းနည်းကိုပြောနေတော့မှာပါ။
PodCast တွင်နားထောင်ပါသို့မဟုတ် YouTube ပေါ်တွင်ကြည့်ပါ ပြည်နယ် ၅၀ လုံးတွင် cbd ရေနံတရားဝင်ဖြစ်သည်
CBD သည်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးလူအများအပြားသည်စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဤ CBD ဆီရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။
ငါ့ညီနဲ့စကားပြောနေတာပဲ သူသည်သူ၏ခွေးအား CBD ဆီပေးသည်။ သင့်ခွေးအား CBD ဆီလည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်မသေချာဘူး။
အဲဒါတရားဝင်လား? ကောင်းပြီ, များစွာသောပြည်နယ်များ, ပြည်နယ်များ, ပြည်နယ်အများအပြားက၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပတ်သက်။ ဆက်လက်စုဆောင်းသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနအားလုံးနှင့်အတူ CBD နှင့်ပတ်သက်။ အလင်းမြင်ကြပြီ, ငါတို့ယနေ့ CBD ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါတို့ဖြစ်လိမ့်မည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်သို့မဟုတ် CBD ဆီအချို့ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရသည့်ပြည်နယ် ၄၆ ခုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။
တကယ်တော့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ CBD တရားဝင်မဟုတ်သောပြည်နယ်လေးခုသာရှိသည်, ထိုပြည်နယ်လေးခုအိုင်ဒါဟို, တောင်ဒါကိုတာ, Kansas ပြည်နယ်နှင့်, албетте, Nebraska ။
ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ၊ ငါသူတို့ဆဲဆဲဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအက်ဥပဒေဖြစ်သောဖက်ဒရယ်ဥပဒေကိုလိုချင်နေသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရစ်ချတ်နစ်ဆင်၏ဤရုပ်ပုံကိုနောက်မှဖယ်ရှားပစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်အပေါငျးတို့သပေးသောထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေမှာအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာလျှော်ပါ ၀ င်သည်။ လျှော်ကြေးသည်လယ်၌ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်လည်းဘာသာရပ်ဖြစ်သည် ထိန်းချုပ်ထားသောတ္ထုများလုပ်ဆောင်ရန် အခြားဆေးခြောက်အဖြစ်တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို။
ပြီးတော့စဉ်းစားပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကဆေးခြောက်ရည်တွေအတွက်ဆေးခြောက်ကြီးထွားမယ်ဆိုရင်ပန်းပဲဖြစ်မယ်၊ သင်ကသူ့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာ၊ ဖိုင်ဘာ (သို့) denatured အတွက်ပဲလျှော်ကိုကြီးထွားနေတာထက်သူကသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မယ်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်မျိုးစေ့သည်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများအက်ဥပဒေအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်သင်က Costco ကိုသွားပြီးသင်ကိုယ်တိုင်အဲဒီကြီးမားတဲ့လျှော်တေနှလုံး၊ မင်းနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုရနိုင်တဲ့လျှော်နှလုံးကိုဝယ်ယူတဲ့အခါသင်ဆိုင်မှာတွေ့နိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုဝယ်လိုက်ရင်သူတို့အဲဒီမှာရှိနေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအထူးသဖြင့် Controlled ထဲကနေဖယ်ထုတ်ထားလို့ပဲ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေ။
စက်ရုံ၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည့်အမျှင်သို့မဟုတ်အမျှင်၊ သိုးများ၊ ချည်ထားသောချည်သို့မဟုတ်ချည်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
သို့ဆိုလျှင်သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လျှော်မှဖြစ်သောကြောင့်ကင်းလွတ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့လာမယ့်အရာနှင့်အတူရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်
ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့စျေးကွက်မျှော်လင့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ငါတို့ကဒီမှာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အရာအကြောင်းနည်းနည်းပြောနေတာလိမ့်မယ်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်ဖက်ဒရယ်ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုလျှောက်လှမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ငါအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ပါ မကြာသေးမီကမနေ့ကပြောရလျှင် Bruce Rounder သည်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် '' လေယာဉ်မှူးလျှော်အစီအစဉ်ကိုထို့ကြောင့်ပြည်နယ်ရှိတောင်သူလယ်သမားများအားအလားတူသီးနှံအနေဖြင့်လျှော်ကိုမည်သို့ကြီးထွားနိုင်ကြောင်းအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။
လယ်ယာဥပဒေကြမ်းသည်မချရသေးပါ။ ၎င်းကိုသင်ပိုမိုလိုချင်ပါက #FarmBillFriday နှင့် hashag #FarmBillFriday နှင့်အတူလယ်ယာဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်ကလျှော်တရားဝင်ဘာသာစကားပါသောလယ်ယာဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွန်ဂရက်မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုရယူပါလိမ့်မည်။ ကီကနေအထက်လွှတ်တော်အမတ် McConnell နေဖြင့်ဥပဒေကြမ်းသို့ထားတော်မူ၏။ သူသည်နှစ်အနည်းငယ်အကြာဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်လျှော်စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့မှန်ကန်စွာရောက်ရှိနေသည်။ အခုငါတို့လယ်ယာဥပဒေကြမ်းမကုန်သေးဘူးရှိသေးတယ်
လယ်ယာဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုပြီးနှင့် CBD Hemp သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတရားဝင်ဖြစ်လာသည်။
ဒီလူကိုဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာကိုစီးပွားရေးအရပြောရအောင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆေးခြောက်ရှေ့နေတစ်ယောက်ပါ။ ဒါက puffery ကျနော်တို့ပညတ္တိကျမ်း၌ပဌနာယျ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်သင်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုတရား ၀ င်ပြောသောအခါ၊ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဟုမဆိုနိုင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအကောင်းဆုံးလို့ပြောရင်အဲဒါဟာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့အရာပဲ။
အဲဒါသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပါ အကယ်၍ Miles Davis ၏စကားကိုကျွန်ုပ်နားထောင်ပြီးသူသည် John Coltrane ထက် ပို၍ ကောင်းသောချိုသာသောကစားသမားဟုထင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သော semantic argument ဖြစ်သည်။ ငါ့အကောင်းဆုံးကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး
တရားဝင်သည်များသောအားဖြင့်နည်းနည်း ပို၍ ဖြတ်၍ ခြောက်သွေ့သည်။ အကောင်းဆုံးဥပဒေရေးရာအရာနှင့်တူသောမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားကအကောင်းဆုံးရှေ့နေလို့ပြောနိုင်ပေမယ့်ကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူး။ ဒါကတရားဝင်တာပါပဲ။ များသောအားဖြင့်တော့ဟုတ်ကဲ့ / မေးခွန်းမပါပါဘူး။ ၎င်းသည်ဖြေဆိုရန်အလွန်ခက်ခဲသွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုရှိပါက၎င်းသည်လုပ်ငန်းဖြစ်သည် ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးခြောက်နှင့်တရားမ ၀ င်အတွက်အဖြေမှန်တစ်စုံတစ်ရာမျှမရှိသောကြောင့်၊ လျှော်ပန်းကနေဆင်းသက်လာသည့်ဆေးခြောက်နှင့် CBD ဆီသည်တရားမျှတမှုရှိသည်။
ထို့နောက်သူသည် ၀.၃% နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်လျှော်ပန်းပွင့်၌ CBD များစွာရှိသော်လည်း THC အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဘယ်လောက်လဲ ငါမသိဘူး။ ငါဆိုသည်ကား၊ ဤဖက်ဒရယ်နှင့်ဆေးခြောက်ဥပဒေများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလေလေ၊ သင်ပိုမိုသဘောကျလေလေ၊ တရားဝင်မှုကိုအရေအတွက်ဆိုင်ရာစကားလုံးတစ်လုံးနှင့် binary yes / no အဖြေတို့နှင့်ဆန့်ကျင်။ အသုံးပြုနိုင်သည်။
စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှသည်စီးပွားရေးသို့ CBD စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခြင်းကဘာလဲ။
ဒါကြောင့်ငါကစွန့် ဦး တီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး CBD ဆီရောင်းချခြင်းကိုအမြောက်အများပြုလုပ်နိုင်ပြီးအချက်အလက်များကိုကြည့်ပြီး CBD သည်အလွန်လူကြိုက်များလာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပြည်နယ် ၄၆ ခုမှာတရား ၀ င်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လို့ခင်ဗျားပြောနိုင်တာပေါ့၊ ပြီးတော့မင်းဟာမင်းဟာလျှော်မှဆင်းသက်လာတာလို့မင်းကပြောတယ်၊
အခုဘယ်သူ့ကိုမှအရေးယူမခံရဘူးလား။ ကောင်းပါပြီ၊ FDA သည် ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၁၆ တွင်အချို့သောအွန်လိုင်း CBD ရေနံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာအချို့ပေးပို့ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်မည်သူကိုဖမ်းဆီးခြင်း၊ လက်ထိတ်ခတ်ယူခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ CBD စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းခြင်းများကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ကသူတို့အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒေကလူတွေကိုဘယ်လောက်လိုက်နာစေမယ်ဆိုတာလောက်ပဲကောင်းတယ်။ မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ဟာတစ်နာရီမိုင် ၇၀ ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်ကတစ်နာရီမိုင် ၇၀ လို့ပြောရင်မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်ရှိသလား။
ဒါကြောင့် Jeff Sessions ကဘာမှမပိတ်ဘူး အဘယ်ကြောင့်? နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရှိသေးသည်။ သို့သော်အများပြည်သူ၏သဘောထားသည်တဖက်သတ်ဖြစ်နေသည်ကိုသူတို့သိကောင်းသိနိုင်သည်။ #FarmBillFriday သည်ကျဆင်းလာကြောင်း၊ ၄၆ ခုမှာဤဥပဒေကိုပြmade္ဌာန်းပြီးပြီဟုသူတို့သိထားကြပြီး၊ နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံပညာ။
ဒါကြောင့်သူတို့ကလူတွေကိုအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ CBD ဆီဆီအမှန်တကယ် ၀ င်ခွင့်ပြုစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကတရားဝင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ ဒါဟာအရောင်းစကားပြောအတွက် puffery ပါပဲ။ ၎င်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသည်၊ အကြောင်းမှာတရား ၀ င်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်သင်ကြွားလုံးထုတ်သောအရည်အသွေးမဟုတ်သောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး။
ပြီးတော့ဘယ်လောက်ဒေတာထွက်ပါသလဲ ကောင်းပြီ၊ ဒါကကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ segment ကိုအဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ စောင့်ပါ၊ မဟုတ်ဘူး။ ရစ်ချတ်နစ်ဆင်သည်သူ၏ရုပ်ဆိုးပြီးရုပ်ဆိုးသောမျက်နှာကိုဖြိုခွဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ဤအပိုင်းကိုအဆုံးသတ်တော့မည်။ သို့သော်၎င်းမတိုင်မီ CBD ၏ရေနံပမာဏမည်မျှပေါက်ကွဲခဲ့သည်ကိုဆွေးနွေးကြပါစို့။
အကယ်၍ သင်သည်လူကြိုက်များသောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကြည့်လိုပါက၎င်းသည်အဘယ်အရာရှာဖွေနေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတစ်စုံတစ်ရာပြောင်းလဲသွားလျှင်၎င်းသည်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သွားရမယ့်လိုင်းသုံးလိုင်းရှိတယ်။ ငါဒီချက်ချင်းထားလိုက်မယ်။ ၎င်းသည်အပြာရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ဖြစ်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်။ အနီရောင်သည်ပြတ်တောက်နေသည်။ အနီရောင်ကဘာလဲ? ကောင်းပြီ၊ အပြာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်။
အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အပြာရောင်ဟာအခြေခံအားဖြင့်လျှော်တေပဲ။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ပြီးတော့အပေါ်ကတစ်ခု၊ အနီရောင်လိုင်းကိုတိမ်နေသော၊ 2017 ၏ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆေးခြောက်သည်ပုံကြမ်းဖြစ်သွားသည်။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ဆေးခြောက်လျှော်ထက်လမ်းပိုမိုလူကြိုက်များသည်, ဒါပေမယ့်ဒီဆေးခြောက်အဖြစ်လူသိများဘယ်နေရာမှာဘီဘီစီခေါ် CBD ခဲ့။ ကြည့်ပါ ဦး ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော (၄) နှစ်ကတည်းကပင်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်လျှော်သလောက်မကြားဖူးသလောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိသောအရာများဖြစ်သည်။ ယခုမှာ၎င်းသည်ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
လူများသည် CBD နှင့် Medical Marijuana အကြောင်းပိုမိုနားလည်လာသည်နှင့်အမျှ အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက် ပို။ ပို။ ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာသည်။ ကောင်းပြီနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်မှာဒီကောင်လေးလုပ်ခဲ့တဲ့မိုက်မဲပြီးမိုက်မဲတဲ့အရာတွေဟာသူ့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာ၊ ဖိုင်ဘာ (သို့) ပိုးကင်းသောအမျိုးအနွယ် မှလွဲ၍ ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာအက်ဥပဒေမှာပါ ၀ င်မှုရှိမရှိသေချာစေရန်နောက်ဆုံးတော့ဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်။
အိုးနင့်ကိုငါမုန်းတယ်၊ ရစ်ချတ်နစ်ဆင်။ ဒါကခင်ဗျားရဲ့အမှားပဲ။
ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေဖက်ဒရယ်လျှော်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်။ သင် CBD မေးခွန်းများကိုယူ
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သူတို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန် (သို့) cannabisindustrylawyer.com သို့သွားပြီး call us ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့မလာခင်မှာတရား ၀ င်ထားပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအပြီးတွင်နယူးယောက်သည်အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်အဖြစ် ၁၅ ခုမြောက်ပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်နယူးယောက်ပြည်နယ်သည်ဆေးခြောက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အခွန်ဥပဒေ (MRTA) ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ MRTA ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
နယူးမက္ကစီကို၏ဆေးခြောက်ထုတ်လုပ်သူလိုင်စင်နယူးမက္ကစီကိုပြည်နယ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်လုပ်သည်။ ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးသောဆေးခြောက်လိုင်စင်ကိုနိုင်ငံတော်သို့စတင်ခဲ့သည်။ သင်ဥပဒေကြမ်းဘက်ပေါင်းစုံနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သို့မိန့်ထွက်စစ်ဆေးချင်လျှင် ...
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဆေးခြောက်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်နည်းဥပဒေများမူကြမ်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်နယူးမက္ကဆီကို၏ဆေးခြောက်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန (CCD) သည်ဆေးခြောက်ထုတ်လုပ်သူများကိုလိုင်စင်ချပေးရန်အတွက်စည်းမျဉ်းမူကြမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်များကို ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၂၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၊
နယူးမက္ကစီကိုပေါင်းစပ်ဆေးခြောက် Microbusiness လိုင်စင်နယူးမက္ကဆီကိုသည်ယခုနှစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးရသောအပန်းဖြေဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ပြုလုပ်သည်။ တရား ၀ င်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်လိုင်စင်များကိုနိုင်ငံတော်သို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ နယူးခ်တွင်ဆေးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်သင်ပြီးသားဖြစ်သည်။
by Tom | ဇွန် 10, 2021 | လူဝီဇီယားနားတွင်ရှိသောဆေးခြောက်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း
Louisiana သမိုင်းတွင်ဆေးခြောက်ကိုပြစ်မှုဖျက်သိမ်းမှုသည်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က Louisiana ရှိဆေးခြောက်ကိုပြစ်မှုဖျက်သိမ်းရန်မဲပေးပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထက်လွှတ်တော်သည်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စီဒရစ်ဂလိုဗာမှထုတ်ပြန်သည့် House Bill 20 ကိုထောက်ခံမဲ ၂၀-၁၇ မဲဖြင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
မိန်း၌ Marijuana စီးပွားရေးလိုင်စင်ရရန်
by Tom | ဇွန် 3, 2021 | မိန်းအတွက်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်
မိန်း၌ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်းမိန်းထဲတွင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်းထင်းရှူးပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်လုပ်ငန်းရှင်အတွက်မည်သည့်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ မိန်းကအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတရားဝင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးရှေ့နေများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များလည်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သင်၏လုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီနိုင်ပြီး၎င်းသည်အလွန်အမင်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသောစည်းမျဉ်းများမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
[contact-form-7 id = "222210 title =" common-footer-form "]
ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါ (309) 740-4033 || အီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]